Manchester City vs. Brighton & Hove Albion - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 6 APRIL 2019 - ESPN - XIDHIIDHKA TELESOM
ACCUEIL » SPORTS Manchester City vs. Brighton & Hove Albion - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 6 APRIL 2019 - ESPN
Manchester City vs. Brighton & Hove Albion - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 6 APRIL 2019 - ESPN
Hadafka degdegga ah ee Gabriel Ciise ayaa ku filnayd Manchester City, afar jeer oo raadraac ah, inay garaacdo Brighton & Hove Albion 1-0 sabtida waxayna uqalantay finalka FA Cup.
Dib ugu soo laabashadiisii ​​kulankii League Cup ee Chelsea, kooxda Pep Guardiola ma aysan aheyn koox ka soo horjeeda kooxda Brighton, lakiin ruuxooda weli waa ay nool yihiin.
Waxa ay seddex daqiiqo gudaheed ku qaadatay City inay ka horeyso koox ka yar Wembley oo buuxda, Jesus ayaa si qoto dheer uga dhexjiray xerada tababarka ee Kevin De Bruyne. .
Wax kastoo qorshaha Chris Hughton ahaa, Qorshaha Master, Bright Hugh ayaa loogu talagalay in uu joojiyo koox xoog leh oo City ah, laakiin weerarka la filayo ma aysan dhicin.
Magaaladu waxay fursad u heleen marka Kyle Walker waxaa laga yaabaa inay nasiib u yeeshay inaanan helin kaadh casaan ah mudada ugu horeysa ka dib markii ay isku dhaceen Alireza Jahanbakhsh waxayna marnaba u muuqan kuwo ammaan ah sida Brighton ay ahayd dhibaato.
Ma jiraan wax badan oo digniino waaweyn ah, halka City ay ku guuleysatay 21th guusheedii ugu danbeysay ee 23 tartamada oo dhan.
Waxay la kulmi doonaan Watford iyo Wolverhampton Wanderers kuwaas oo ku kulmi doona Axada semi-finalka. XIDIGAHA - Isha Koowaad Ee Ciyaaraha Maxaa Cusub »City ayaa guul darreysatay booska koowaad ee horyaalka Premier League ee Liverpool maalintii jimcaha, inkastoo ay kaliya labo dhibcood ka danbeeyaan hal kulan. Waxa ay wajihi doonaan Tottenham Hotspur wareega quarterfinal ee Champions League.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/report?gameId=538757
Hadafyada 10 ee HAZARD kuwaasoo booqday Dunida - VIDEO